MIHAZONA NY FANEKENY ANDRIAMANITRA | Fitandremana Ankadifotsy
MIHAZONA NY FANEKENY ANDRIAMANITRA
Manafay Andriamanitra (21-41). Ny fiverimberenan’ny «Izaho/…ko» sy «ianareo» dia maneho ny elanelana misy eo amin’Andriamanitra sy ny vahoakan’Israely. Andriamanitra tenany, Ilay Tompon’ny Sabata sy nanao fanekena no miditra an-tsehatra manafay ireo mikiri-biby manohitra Azy. Ota, fivadiham-panekena ny tsy fetezana hihaino an’Andriamanitra. Marina Andriamanitra ary mamaly, mikapoka araka ny ratsy natao (mamaly impito). Isan’ny valin’ny ota sy maneho ny fahatezeran’Andriamanitra ny fandringanana (bibidia, sabatra, areti-mandringana, fahavalo, hanoanana) sy ny fahababoana (Babylona) izay mahatonga fijaliana, fahakiviana sy tsy fiadanana am-po ary faharavana.
Mamindra fo Andriamanitra (42-46). Ny kapoka, ny sazy dia tsy midika fa nafoin’Andriamanitra ny olony. Fitaovam-panadiovam-piainana ny fahababoana, tany Babylona, maneho ny maha an’Andriamanitra ny olony (28, 18, 42-45 ; Deotoronomia 30; Amosa 3.2; Hebreo 12.5-13). Mba ahatonga azy ireo ho amin’ny fibebahana sy fahamasinana, ka hitodika tanteraka Aminy. Na eo aza izany rehetra izany, tsy nandrava ny fanekeny izay nataony tamin’ireo patriarka izay nafahany teo imason’ny jentilisa Andriamanitra mba tsy hitenenan-dratsy ny Anarany.
Fahamarinana : Maro amin’ny olona miaina ny toe-panahy araka an’Andriamanitra no iharana fahoriana sy fanenjehana. Ny tsy azo adinoana anefa, na ho ela na ho aingana, ny olona rehetra tsy misy ankanavaka na jiosy na jentilisa dia samy hiatrika ny fitsaran’Andriamanitra ary samy handray ny valin’ny nataony teto an-tany na tsara izany na ratsy (I Korintiana 3.10-15; II Korintiana 5.10).